Manya Anigye Pii wɔ Onyankopɔn Som Mu | Asetenam Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Manya Anigye Pii wɔ Onyankopɔn Som Mu
Peter Carrbello anom asɛm
Mesua no, ade baako a na ɛteetee me ne nnipa mu nyiyim. Afei na mefɛre ade, na na mesuro sɛ anhwɛ a na nneɛma akɔ bɔne ama me. Ná menim sɛ Bible bɛtumi aboa me, enti mekɔɔ Katolek Asɔre a ɛwɔ yɛn mpɔtam hɔ sɛ mɛte Bible ase anaa. Nanso manhu so, enti mede m’adwene kɔɔ agokansi so.
Ankyɛ koraa na mede me ho hyɛɛ agodi bi a na yɛhurihuri bubu fa so mu, na na mesan mema nnade so. Afei mebuee gyem wɔ San Leandro, California, U.S.A., na na nkurɔfo bɛmema nnade so wɔ hɔ. Wɔn mu baako mpo bɛyɛɛ Amerika ahoɔden-mɛnsa. Mememaa nnade so ara ma sɛ wohu me a, wohu sɛ barima ni! Nanso, ɛno nso ammoa me.
ME NSA KAA NEA MEREHWEHWƐ
Ná me yɔnko bi nim sɛ mepɛ sɛ mete Bible no ase, enti ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔpɛ sɛ obi ba me nkyɛn. Ade kyee no, mewɔ fie ara na Yehowa Danseni bi bae. Mebisaa no nsɛm pii, na emu biara, Bible na ɔde yii ano. Yɛtenaa ase bɛyɛ nnɔnhwerew nnan, na meka kyerɛɛ no sɛ ɔnsan mmra saa da no ara anwummere. Ɔbae no, yɛtenaa ase bɔɔ Bible mu nkɔmmɔ kɔsii anadwo dasum. M’ani gyee nea mesuae no ho ara ma meka kyerɛɛ no sɛ ade kye a, mepɛ sɛ me ne no kɔ na mekɔhwɛ sɛnea ɔyɛ asɛnka adwuma no. Yɛkɔe no, mehuu sɛ asɛm biara a obi bebisa no no, ɔde Bible ma ho mmuae. Ɛno yɛɛ me nwonwa paa. Ɛhɔ ara na mebɔɔ me tirim pɔw sɛ saa adwuma no ara bi na mɛyɛ.
Enti metɔn m’adwuma no na me ne Yehowa Danseni a ɔbaa me nkyɛn no kɔyɛɛ asɛnka adwuma. Ná ɔyɛ ɔkwampaefo (Yehowa Danseni a ɔde bere pii yɛ asɛnka adwuma). Yehowa Adansefo yɛɛ nhyiam bi wɔ Cow Palace Arena wɔ San Francisco, California. Yɛyɛɛ saa nhyiam no May 1948, na ɛhɔ na mebɔɔ asu. Saa afe no ara, me nso mebɛyɛɛ ɔkwampaefo.
Me maame nso, memaa Adansefo kɔsraa no. Ɔtiee wɔn, na ankyɛ na ɔno nso bɛyɛɛ Yehowa Danseni. N’abusuafo tan n’ani nanso ɔde mfe pii som Onyankopɔn kɔsii sɛ ɔwui. Me maame akyi no, me busuani biara nni hɔ a wabɛyɛ Ɔdanseni.
MEHYIAA ME YERE
Afe 1950 mu no, metu kɔɔ Grand Junction, Colorado. Ɛhɔ na mekohyiaa Billie. Wɔwoo Billie afe 1928, na bere a ɔrenyin no, na wiase sikasɛm ayɛ basaa. Anadwo biara, na Billie maame Minnie sɔ krasin kanea de kenkan Bible kyerɛ no. Enti Billie dii mfe nnan no, na wahu akenkan, na na ɔnim Bible mu nsɛm pii. Ɛrekɔ afe 1949 no, Billie maame ne Yehowa Adansefo suaa Bible, na ɔbɛhui sɛ Ɔbonsam gya biara nni hɔ a wɔyɛ nnipa ayayade wom. Mmom no, nnipa wu a, wɔkɔ adamoa mu. (Ɔsɛnkafo 9:5, 10) Minnie ne ne kunu nyinaa bɛyɛɛ Adansefo.
Ná Billie kɔ sukuu wɔ Boston, na ɔwiee afe 1949. Ɔbaa fie no, ɔno nso yeree ne ho suaa Bible. Anka ɔbɛtumi akɔkyerɛ ade, nanso ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔde ne ho bɛma Onyankopɔn. Enti afe 1950 no, Billie bɔɔ asu wɔ Yehowa Adansefo nhyiam kɛse bi ase wɔ Yankee Stadium, New York. Ɔbɔɔ asu no, ankyɛ na yɛhuu yɛn ho. Yɛwaree, na yɛboom yɛɛ akwampae adwuma no.
Yɛfii yɛn akwampae adwuma no ase wɔ Eugene, Oregon, na yɛnyaa nnamfo bebree wɔ hɔ a yɛne wɔn abɔ abɛsi nnɛ. Afe 1953 no, yɛtu kɔɔ Grants Pass, Oregon kɔboaa asafo bi a na emu nnipa nnɔɔso. Saa afe no ara, wɔtoo nsa frɛɛ yɛn ma yɛkɔɔ Gilead Bible Sukuu a ɛbɛn South Lansing, New York. Ɛfi New York City atifi fam rekɔ hɔ no yɛ kilomita 400. Ɛyɛ sukuu a Yehowa Adansefo de tete asɛmpatrɛwfo. Ná yɛka adesuakuw a ɛto so 23 no ho.
YƐKƆYƐƐ ASƐMPATRƐWFO WƆ BRAZIL
Yɛwiee Gilead akyi abosome nnum no, me ne Billie de wimhyɛn kɔɔ Brazil wɔ December 1954 mu. Yɛtui no, bɛyɛ dɔnhwerew baako na biribi sɛee wɔ wimhyɛn no ho. Nanso ɛtumi kɔgyinaa Bermuda dwoodwoo. Yɛtoaa akwantu no so, nanso wimhyɛn no san sɛee ma yɛsan gyinae wɔ Cuba. Yɛfii Cuba no, yɛdii nnɔnhwerew pɔrepɔre 36 ansa na yɛredu Yehowa Adansefo adwumayɛbea hɔ wɔ Rio de Janeiro, Brazil.
Ahenni Asa a ɛdi kan wɔ Bauru—afe 1955. Ɛyɛ ɔdan a yɛhanee, na mekyerɛw “Ahenni Asa” bɔɔ anim
Me ne Billie tenaa hɔ kakra, na yɛne asɛmpatrɛwfo foforo mmienu kɔtenaa Bauru, São Paulo, na yɛfii asɛmpatrɛw adwuma ase wɔ hɔ. Saa bere no, na nnipa a wɔwɔ kurow no mu boro 50,000, na yɛn ne Yehowa Adansefo a wɔdii kan kɔɔ hɔ.
Yɛfii ase kɔɔ afie afie, nanso ankyɛ koraa na Katolek sɔfo a ɔwɔ kurow no mu tuu n’ani sii yɛn so. Sɛ yɛrekɔ asɛnka a, na ɔdi yɛn akyi keka kyerɛ nkurɔfo sɛ mma wɔnntie yɛn. Nanso nnawɔtwe kakraa bi akyi no, abusua kɛse bi a na yɛne wɔn sua Bible bɛgye toom sɛ nea wɔresua no yɛ nokware, na akyiri yi wɔbɔɔ asu. Ankyɛ na yɛnyaa nnipa foforo ne wɔn suaa ade.
Abusua a wɔbɔɔ asu no, na wɔn busuani bi da kuw kɛse bi ano. Mekɔgyee kuw no dan sɛ yɛde bɛyɛ nhyiam. Ɔsɔfo no tutu guu kuw no mpanyimfo asom sɛ mma wɔmmfa dan no mma yɛn. Ɔpanyin a ɔda kuw no ano no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moamfa amma wɔn a, me ne mo awie!” Nea ɛkɔsii ara ne sɛ afei de wɔde hɔ maa yɛn ma yɛyɛɛ nhyiam no.
Afe 1956 mu no, wɔtoo nsa frɛɛ yɛn ma yɛkɔɔ ɔmantam nhyiam wɔ Santos, São Paulo. Adansefo bɛyɛ 40 na wɔfi yɛn asafo mu de keteke kɔɔ nhyiam no bi. Yɛsan baa Bauru no, na krataa abɛsi m’akyi sɛ menkɔsrasra Yehowa Adansefo asafo ahorow nkɔhyɛ wɔn den. Enti efi hɔ no, yɛde mfe 25 kyinkyin Brazil man no mu.
Afe baako pɛ ntam no, yɛnyaa Ahenni adawurubɔfo a wɔyɛ nnam wɔ Bauru
SƐNEA NA ADWUMA NO TE
Saa bere no, na akwantu nna fam. Ɛkame ayɛ sɛ baabiara nni hɔ a yɛankɔ wɔ ɔman no mu. Ná yɛde bɔs, keteke, teaseɛnam, ne sakre na etu kwan, na ɛtɔ da nso a na yɛtumi nantew. Nkurow a yɛdii kan kɔɔ hɔ no baako ne Jaú, São Paulo. Ɔsɔfo a ɔwɔ hɔ no ne yɛn pem so.
Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ, “Monni kwan sɛ mo ne ‘me nguan kasa!’”
Yɛn nso yɛka kyerɛɛ no sɛ, “Wɔnnyɛ wo nguan, wɔyɛ Onyankopɔn dea.”
Yɛyɛɛ nhyehyɛe sɛ asɛnka adwuma a yɛreyɛ wɔ wiase nyinaa no, yɛbɛyi ho sini akyerɛ ɔmanfo. Sini no, na wɔato din The New World Society in Action. Nanso, ɔsɔfo no kɔboaboaa n’asɔremma ano sɛ wɔmmɛto nhyɛ yɛn so. Ɛhɔ ara na yɛfrɛɛ polisifo. Bere a ɔsɔfo no ne n’asɔremma bɛduu hɔ no, na polisifo gyinagyina hɔ kurakura atuo. Enti nnipa bebree tumi hwɛɛ sini no maa wɔn ani gyei paa.
Saa bere no, baabiara a yɛkɔe no, asɔfo ne nkurɔfo tan yɛn ani. Ɛho nhwɛso ne kurow bi a ɛbɛn Blumenau, Santa Catarina. Wɔfrɛ hɔ Brusque. Yɛkɔɔ hɔ no, yɛhyiaa akwampaefo mmienu wɔ hɔ. Ná wɔrehyia ɔtaa a emu yɛ den paa, nanso wɔmiaa wɔn ani gyinaa mu, na wɔn mmɔdenbɔ no so aba mfaso pii. Ɛnnɛ, mfe 50 abɛtwam, na asafo bɛboro 60 na ɛwɔ saa mpɔtam hɔ. Afei nso wɔasi Nhyiam Asa fɛfɛ wɔ kurow bi a ɛbɛn hɔ a wɔfrɛ hɔ Itajaí.
Ade baako a ɛmaa yɛn ani gyei paa wɔ yɛn akwantu adwuma no mu ne hokwan a na yɛnya ne Adansefo foforo yɛ nhyiam akɛse ho nhyehyɛe. Afe 1975 kɔsi afe 1977 mu no, menyaa hokwan hwɛɛ nhyiam bi so. Yɛyɛe wɔ agoprama kɛse bi so, na wɔfrɛ hɔ Morumbi Stadium. Asafo a ɛbemmɛn hɔ no, yɛsrɛɛ emu bɛyɛ ɔha sɛ wɔn mu biara mfa nnipa du mmra mmɛsiesie hɔ anwummere a ade rebɛkye ama nhyiam no afi ase no.
Ná bɔɔlbɔfo bi wɔ hɔ, na anwummere no wɔrefi hɔ no, wɔn mu bi ka serewee sɛ: “Mmea mfeamfeaa a wɔkurakura prae ne ntamagow yi de, dɛn na wɔbɛtumi ayɛ?” Nanso, eduu anadwo 12 no, na agoprama no so atew nwann! Nea ɔhwɛ stadium hɔ no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, “Adwuma a mode nnɔnhwerew kakraa bi ayɛ yi, me nkurɔfo no a, anka ɛbɛgye wɔn nnawɔtwe mua!”
YƐSAN KƆƆ AMERIKA
Me papa wui afe 1980. Enti yɛsan baa Amerika bɛhwɛɛ me maame wɔ Fremont, California. Yɛyɛɛ akwampae adwuma wɔ hɔ, na yɛnyaa hokwan boaa Portuguese asafo a na ɛwɔ yɛn mpɔtam hɔ no. Ná yɛyɛ aprapra adwuma anadwo de hwɛ yɛn ho. Akyiri yi, yɛtu kɔɔ San Joaquin Valley a ɛbɛn hɔ no. Yɛkɔhwehwɛɛ nnipa a wɔka Portuguese kasa, na na asasesin a yɛyɛ mu adwuma no fi Sacramento ara kɔsi Bakersfield a ne nyinaa wɔ California. Seesei, asafo a wɔka Portuguese kasa bɛyɛ du na ɛwɔ California.
Me maame wui afe 1995, na yɛtu kɔɔ Florida kɔhwɛɛ Billie papa kɔsii sɛ ɔwui. Billie maame de, ɔwui afe 1975. Afe 2000 mu no, yɛtu baa Colorado anafo fam baabi a ɛgu mmepɔw so. Ɛha na Amerika kurow mma a wɔwɔ Navajo ne Ute no te, enti yɛde yɛn bere nyinaa kaa asɛmpa no kyerɛɛ wɔn. Awerɛhosɛm ne sɛ, February 2014 mu no, Billie wui.
Ɛyɛ me anigye sɛ mfe 65 a atwam ni no, mehyiaa Yehowa Danseni bi maa ɔde Bible yii me nsɛmmisa ano. Nea ɛyɛ me dɛ ne sɛ asɛm biara a ɔkae no, mesan hwehwɛɛ mu hui sɛ saa na Bible kyerɛkyerɛ ankasa. Ɛno a meyɛe no ama manya anigye pii wɔ Onyankopɔn som mu.